Hel Website-kaaga Cusub ee ay ku jiidaneyso Google
Dhawaan, waxaan bilaabay bogag badan oo cusub. Maaddaama AddressTwo weynaatay waqtigayguna xoroobay, waxay abuurtay duufaanno qumman oo fikrado cusub iyo wakhti firaaqo ah oo lagu fuliyo, marka waxaan iibsaday daraasiin domains ah waxaanna hirgaliyay bogag yar yar bidix iyo midig Dabcan, waan samir badanahay, sidoo kale. Waxaan hayaa fikrad maalinta Isniinta, waxaan dhisayaa Talaadada, waxaana rabaa taraafikada Arbacada. Laakiin waxay qaadan kartaa maalmo ama toddobaadyo ka hor intaan cinwaankeyga cusubi ka muuqan raadinta Google, xitaa markaan raadinayo magaceyga gaarka ah.
Marka, waxaan bilaabay inaan kafiiriyo qaaciddada si caarooyadu dhaqso ugu yimaadaan. Haddii SEO uu yahay alechemy, markaa kani waa gurigeyga-soo-saaridda si loo dardargeliyo waqtiga laga bilaabo bilawga illaa tusmada. Way fududahay, laakiin la xaqiijiyay wax ku ool ah. Qaar ka mid ah tijaabooyinkeygii ugu dambeeyay waa la gurguurtay waxayna ka muuqdeen natiijooyinka raadinta wax ka yar 24 saacadood. Kaliya waxaan raacayaa 8dan talaabo ee fudud.
Samee SEO-kaaga bogga marka hore, ugu yaraan ugu yaraan. Admitedly, taasi waxba kuma laha la gurguurto, laakiin hadaadan tan marka hore sameyn, 7da talaabo ee xigta waa wax aan micno lahayn. Gaar ahaan, hubi in sumadahaaga cinwaannada la habeeyay. Maxay tani muhiim u tahay? Sababta oo ah, in kasta oo aan caaro ku soo gaari karno boggaaga, taas macnaheedu maahan inay dhakhso ugu laaban doonaan. Marka, haddii bilowgaaga hore uu leeyahay sumado cinwaankiisu si liitaa u qoran yahay, markaa waad ku xayiran kartaa toddobaadyada soo socda iyadoo la isticmaalayo waxyaabo ka-yar-ku habboon oo ku habboon keydka Google. Hubso in waxa aad ku degdegeyso in laguu arko ay mudan tahay in loo arko sida-ay tahay dhowr toddobaad inta aad sugeyso guurguurashada soo socota.
Ku rakib Google Analytics. Tan ku samee ka hor khariidadda bogga hal sabab oo fudud: waxay ilaalisaa waqti. Mid ka mid ah siyaabaha aad ku xaqiijin karto degelkaaga cusub Webmaster-ka Google waa iyada oo loo marayo Analytics qoraalka. Marka, keydso tallaabo oo tan marka hore samee. Si tan loo sameeyo, booqo www.google.com/analytics.
U soo gudbi khariidadda bogga ee 'XML' Qalabka Google Webmaster. Waad rakibi kartaa mid kasta oo ka mid ah daraasiin WordPress ah si aad si toos ah ugu sameysid khariidadan bogga, ama aad mid ku sameysato gacanta. Tani waxay lagama maarmaan u tahay helitaanka guurguuritaan sax ah oo dhammaystiran, hase yeeshe dad badan oo aqoonyahanno ah oo khibrad leh ayaa aaminsan inay tahay dhammaadka dhammaadka ku gurguurashada. Ma ahan. Haddii aad ku joogsatid tillaabadan, sida 99% milkiileyaasha websaydhada cusub sameeyaan, markaa waxaad sugi doontaa toddobaadyo ama bilo kahor inta Google ku wareegin inuu gurguurto boggaaga. Waxa soo socda ayaa dardar galin doona hawshaas. Si aad u dhammaystirto tallaabadan, booqo www.google.com/webmasters
Kudar URL-ka Profile-kaaga LinkedIn. Markaad wax ka beddeleyso astaantaada 'LinkedIn', waxaad awood u leedahay inaad ku darto illaa 3 websaydh URL ah. Haddii aad horeyba u wada isticmaashay seddexdaas boos, waa waqtigii si ku-meelgaar ah loo sadqeyn lahaa. Xulo mid ka mid ah URL-yada si aad uga saarto toddobaadyada soo socda kuna beddel URL URL boggaaga cusub ee la daabacay. Ha walwelin, gadaal ayaad tan gadaal ka beddeli kartaa. Ku qor ogeysiis jadwalkaaga muddo aan ka badnayn 14 maalmood ka dib si aad ugu laabato astaantaada 'LinkedIn' oo aad ugu soo celiso liiskaaga URL wixii aad horay u haysatay. Muddada 14-ka maalmood ah, Google waxaa macquul ah inuu helay xiriiriyaha cusub oo uu raacayo websaydhkaaga.
Kudar URL-ka Profile-kaaga Google. Google aad ayuu ugu jilicsan yahay tirada xiriiriyeyaasha ay u oggolaadaan astaantaada. Markii aad ka soo gasho Google, bog kasta oo Google ah (oo ay ku jiraan gurigooda) waxaad riixi kartaa Arag Faahfaahinta geeska kore ee midig, ka dibna riix Wax ka beddelka Xogta. Midigta, waa inaad ka heshaa qaybta loo yaqaan "Links". Halkaas, waxaad ku dari kartaa xiriiriye qaas ah. Halkan, xitaa waxaad ku dejin kartaa qoraalka barroosinka ereyga muhiimka ah ee aad doorbideyso markii aad URL cusub ku darto astaantaada Google.
Sheeg boggaaga Wikipedia. Taasi waa sax, waxaan ku dhiibayaa Wikipedia. Waxaad ku soo diri kartaa nacaybka-mail-kaaga nacaybka nick@i-dont-care.com. Hadafkaaga halkan waa inaad ku soo xigato ilaha boggaaga (maqaal blog ah ama bog kale oo macluumaad ah) maqaal ku habboon Wikipedia. Waxaa jira farshaxan tan. Waa kan hadafku: in tixraacaagu badbaado ugu yaraan 72 saacadood kahor intaan qof ku tirtirin Wikipedia. Si tan loo dhammeeyo, raadi maqaal aan caan ahayn. Haddii maqaalku helo wax ka beddello badan maalintii, waxay u badan tahay in ku daristaada si dhakhso leh loo tirtiro ka hor inta aaladda Google aysan fursad u helin inay hesho. Laakiin, haddii aad hesho maqaal hela wax-ka-beddelka bil kasta hal mar, taasi waa tigidhkaaga dahabka ah. Ku dar weedh caqli gal ah oo ku habboon (haa, xitaa aqoon iyo xaqiiqo) xukun cusub oo ku lifaaq a CITE_WEB tixraac dhamaadka. Ha noqon mid aad u dhiirran adoo ku daraya qayb cusub ama sadar. Ujeedadaadu waa in loo arko bots, laakiin MA aha in dadku dareemo.
Daabac maqaal Google Knol ah. Markay Google ogaatay in Wikipedia ay caan ku tahay, waxay isku dayeen inay la tartamaan. Google Knol (www.google.com/knol) waa mid aad uga hooseeya aqoonta mana jiro nidaam feejignaan ah oo loogu talagalay tirtirka maqaallada danaha gaarka ah. Xaqiiqdii waad damaanad qaaday inaad haysatid Knol-kaaga weligiis. Taas macnaheedu waa: way fiicnaan laheyd. Ha daabicin wax badbaadaya oo si liidata uga tarjumaya magacaaga iyo sumaddaada nolosha. Qor maqaal gaaban oo laxiriira sida gelitaanka barta oo dib ugulaxir URL-kaaga cusub ee la daabacay. Sida wax kasta, oo ay ku jiraan ereyada muhiimka ah ee cinwaanka Knolkan iyo qoraalkaaga barroosinka ayaa lagugula talinayaa sidoo kale.
Daabac fiidiyow Youtube ah. Dhowr bilood ka hor, waxaan daabacay maqaal faahfaahinaya sida loo helo link juice ka Youtube. Adigoon ku soo celin mawduuca halkan, waxaan si fudud kuugu sheegayaa inaad raacdo tilmaamaha halkan talaabadaada 8aadna waa la dhameystiri doonaa.
Dhammaan waa la isku daray, markaan furo degel cusub waxaan hayaa ugu badnaan 30 daqiiqo oo shaqo ah inaan qabto ka hor intaanan dhammaysan. Haddii aan sameeyo dhammaan sideed ka mid ah tallaabooyinkan, waxaan ku kalsoonaan karaa in boggeygu ka muuqan doono raadinta Google maalmo gudahood, haddii aanu ahayn saacado. Sidee? Maxaa yeelay waxaan siiyay Google fursad kasta oo ay ku ogaan karto URL-kan cusub. Haddii aad ogaatay habab kale oo aad u isticmaasho "alchemy" fadlan xor u noqo inaad la wadaagto faallooyinka hoose.
Tags: natiijooyinka ganacsigabarnaamijyada kuuboonkuuboonada wareegasarah dhacSlider
Waxaan jecelahay inaan kuugu hambalyeeyo inaad qabatay shaqo fiican Nick.
Qoraal weyn, Nick. Waxaan ku guda jiraa buuxinta buuxinta boggayaga internetka dhibco, ereyo muhiim ah, iyo waxyaabo kale oo laxiriira ganacsigeena. Ma ahan sida aan doonayo in wax walba dhamaadka u ekaadaan, laakiin waa bilow, waana mid saameyn ku leh. Waxaan u maleynayaa inaad adigu mar uun i weydiisay, “maxaa kaa hortaagan inaad bilowdo?” taas oo aan ugu jawaabey, "waxba, waxaan bilaabayaa usbuuca dambe." Waxaad ugu jawaabtay, "Maya. Maxaa kaa hortaagan inaad bilowdo, MAANTA? ”
Jun 29, 2011 saacadu markay ahayd 1:26 AM
Taasi waxay u egtahay wax aan dhahayo 😉
Miyaad dib u dhigeysaa gudbinta guurguurashada illaa aad ka hesho nuqulkaaga websaydh ah oo ku filan erayga muhiimka ah ed er… Waxaan ula jeedaa "la hagaajiyay"?
Jun 29, 2011 saacadu markay ahayd 12:51 AM
Maqaal wanaagsan oo ay ka buuxaan tusaalooyin adag, laakiin leh laba waxyaalood oo lala yaabo; Bogagga Twitter iyo Facebook. Maaddaama Google ay bixinayso marin u helista durdurka Twitter-ka, koonto leh maamul hufan oo wadaagga xiriiriyaha lagana yaabo in dad kooban ay dib ugu daabacaan cabir wanaagsan waxay Google ka heli doontaa baaritaanka. Xitaa haddii aan la raacin. Haddii aad rabto inaad hubiso in wax-raacistu aysan wax saameyn ah ku yeelan doonin, RSS-ka ugu qoondee akoon xayeysiis ah.
Sidoo kale bog Facebook ah, oo aan ahayn muuqaal, ayaa dhaqso u gurguurta sidoo kale. Cabbiraadda wanaagsan tweet waxay xiriir ku leedahay xaaladda bogga Facebook, iyo Facebook waxay ku dhejisaa xiriir bogga Twitter. Sababta aan ugula talinayo kuwan waa dad badan oo horeyba u lahaa hal ama labadaba dejin.
Tani sinnaba ugama hor imaaneyso waxa aad sameyneyso dabcan, in yar oo kale oo aad iila shaqeeyay si wanaagsan. Si kastaba ha noqotee, dhigista xiriiriyeyaasha halka Google ay si joogto ah u gurguuranayaan halka heerka gurguurashada iyo miisaaniyadda gurguurta ay ku yar tahay degel cusub ama bogga dib loo eegay wuxuu dedejinayaa tusmeynta waana fikrad fiican.
Jun 29, 2011 saacadu markay ahayd 1:24 AM
Kevin, waad saxantahay Labadaas waa inay halkaa ku jiraan. Waa tan sababta aysan u sameyn karin cuntadeyda "alchemy":
- Iyadoo la adeegsanayo twitter-ka, ujeeddada oo dhami waxay tahay inaad u baahan tahay xisaab-klout aad u sarreeya si aad uga soo tweet gareeyso. Haddii aad sameysato akoon cusub oo twitter ah, waxaan ku qanacsanahay inay taasi qiimo yar u leedahay helitaanka dareenka gurguurta.
- Marka la eego Facebook, dhibaatadu waxay tahay in bog uu qaato waqti yar in si fiican wax loo qabto, iyo in si xun loo sameeyo waxay noqon kartaa waxyeello ka badan tan wanaagsan.
Haddii aad haysato kheyraad, fikrad kale oo wanaagsan oo aan inta badan sameeyo laakiin aan khasab ku noqon karin inaan qoro qof walba waa inaad dhigto xiriiriye websaydhkaaga cusub oo ka imanaya degel maamul sare oo aad adigu hore u lahayd. Dabcan, dad badan ayaan horey u laheyn mid, sidaa darteed markale, waan ka reebay taa.
Waad ku mahadsantahay ku darida kuwan.
Jun 29, 2011 saacadu markay ahayd 2:56 AM
Waad ku mahadsan tahay Nick fikradahan waaweyn… Waxaan u gudbin doonaa macaamiishayda. Miyaad ka xumahay haddii aan dib ugu celiyo tan boggeyga adiga oo leh amaan buuxda adiga?
Dhib malahan. Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ka tarjunto ama aad erey dib ugu qorto qaybo ka mid ah si aanad ugu kadsoomin nuqul ka kooban.
Jun 29, 2011 saacadu markay ahayd 5:37 AM
Fikrado waaweyn Nick. Kani waa qaacido adag. Kama aanan fikirin Wikipedia ama Knol, laakiin taasi badanaa waxay ugu wacan tahay wax ka beddelka joogtada ah. Waa inaan xasuustaa taas mustaqbalka.
Fikirka Youtube ayaa kafiican wikepedia ……… ..
Midna ma sameyn laheyn kan kale la'aantiis. Google lama saadaalin karo, Wikipedia-na badanaa wuu gurguuraa.
Nov 24, 2011 saacadu markay tahay 3:32 PM
Kaliya waxaan dhigaa Xiriiriyaha Bloggeyga, wax yar kadibna maalin ayaan ku gurguurtaa. Si fudud.
talooyin wanaagsan mahadsanid